Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Finance, Accounting အလုပ်အကိုင်များ
ငွေကြေးနှင့်စာရင်းကိုင် Jobs in Myanmar
ငွေကြေးနှင့်စာရင်းကိုင် အလုပ် 96 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
Account Manager မှ ချမှတ်ပေးသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ Product Code များကို Software နှင့် ထုတ်နိုင်ရမည်။ လိုအပ်ပါက Production Department နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
• ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းအမျိုးအမည်များ သိရှိနားလည်ရမည် ။ • ငွေနှင့်စာရင်းအပိုင်း တိကျပိုင်နိုင်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ရမည်။ • ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ • မြောက်ဒဂုံအနီးနေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်များ တွက်ချက်နိုင်ရမည်။ F&B ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဈေးနှုန်းများအတွက် ရေတိုနှင့် ရေရှည်စီမံကိန်းရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာပစ္စည်း stock inventoryများ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်လို အပြော၊အဖတ်၊အရေး ပိုင်နိုင်ရမည်။
- ရန်ကုန်မြိုတွင်းကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရမည်။ - ပစ္စည်းဝယ်ဘောင်ချာ စာရင်းများအားအတိအကျ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ - ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမည်။လိုအပ်ပါကရုံးကိစ္စများပါဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - Food & Beverage ပစ္စည်းများအားကျွမ်းကျင်စွာဝယ်ယူနိုင်ရမည်။ - ရိုးသားကြိုးစား၍အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်
ဝယ်ယူမှုများနှင့် ဝယ်ယူမှုအားလုံးကို ပုံမှန်အကဲဖြတ်ရမည်။ Purchase order ဒေတာများကို ထိန်းသိမ်းပြီး suppliers များနှင့် ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။ Oversea suppliers များနှင့် ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းရမည်။ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကောင်းမွန်ပြီး ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြော၊ဖတ်၊ရေး ပိုင်နိုင်ရမည်။
Job brief We are looking for an ambitious Junior Accountant to provide support to the financial department by managing daily accounting tasks. You will be part ofateam of professionals working to maintain order and transparency for the company’s finances. Preparing financial statements and reporting arealarge part of the junior accountant’s day-to-day work. The ideal candidate will be well-versed in accounting principles and able to work comfortably with numbers and attention to detail. The goal is to contribute to the overall efficient operation of the department and help the company be fully aware of its financial condition. This way it can make the right decisions and accomplish long term success. Responsibilities Post and process journal entries to ensure all business transactions are recorded Update accounts receivable and issue invoices Update accounts payable and perform reconciliations Assist in the processing of balance sheets, income statements and other financial statements according to legal and company accounting and financial guidelines Assist with reviewing of expenses, payroll records etc. as assigned Update financial data in databases to ensure that information will be accurate and immediately available when needed Prepare and submit weekly/monthly reports Assist senior accountants in the preparation of monthly/yearly closings Assist with other accounting projects
အကျိုးအမြတ်: Meal & Transportation